M/weyne Siilanyo oo amar ku bixiyey in ciidanka Somaliland ay la wareegaan deegaanka Kalshaale, gobolka Cayn. – Radio Daljir
M/weyne Siilanyo oo amar ku bixiyey in ciidanka Somaliland ay la wareegaan deegaanka Kalshaale, gobolka Cayn.
Janaayo 10, 2011 12:00 b 0
Hargeysa, Jan 09 – War saxaafadeed ka soo baxay madatooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in M/weyne Siilaanyo iyo xukuumadiisu ay go’aamo ka soo saareen deegaanka Kalshaale, Cayn oo ay hore ugu dagaakaneen laba ardaa oo oodwadaag ah oo ka kala tirsan gobollada Cayn & Togdheer.
War saxaafadeedka ayaa dhigayey in:
1. Goobaha shaqaaqadu ka dhacday iyo deegaanka lagu muransan yahay in maanta laga bilaabo ay ahaato fadhiisin ciidanka leeyahay oo ka caagan dhisme iyo qodaal balse ay labada beelood wada daaqi karaan, wixii hanti ka gashay labada dhinacna dawlada ayaa u celinaysa cidii lahayd,
2. Dhimashadii, dhaawicii iyo hantidii ku luntay shaqaaqadii dhex martay labada beelood waxaa dawladu u raacayaa una fulinayaa sidii ay ku xukuntay guddiga garsoorku,
3. Waxaa labada dhinac farayaa inay kala baxaan ciidamadooda Kalshaale, Maygaagle iyo Hagoogane iyadoo aan laga ogolaan doonin ciidamo beeleed abaabulan, waxaa kaliya oo ka hawlgeli kara ciidamada Somaliland,
4. Waxaan mar labaad baaq iyo gogol nabadeed u soo jeedinayaa beelaha Buuhoodle, Sool iyo Sanaag Bari.
Waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa:
a) Ciidamada qaranka dadaalkii iyo dhabar adaygii ay sameeyeen,
b) Guddigii dhexdhexaadka ahaa oo si hufnaan iyo cadaalad leh ugu gar qaaday mashaqadii dhexmartay labada beelood,
c) Xubnihii dawlada iyo xisbiyada ee halkaa sida fiican uga soo shaqeeyay.
Wasiirka qorshaynta ee Puntland oo tafaasiil ka bixiyey qorshaha gargaarka deg degga ah ee gurmadka abaaraha.
Afhayeenka baarlamaanka Puntland oo ka xog warramay wax qabadka golaha & doodaha mudanayaasha baarlamaanka ee kalfadhigan.